ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲမှ လူထုတ်ပုံ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မော်ရင်ဟို ရဲ့ ဝေဖန်မှု အပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန့်ပြန် လိုက်တဲ့ #လမ်းပတ် - SPORTS MYANMAR
ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲမှ လူထုတ်ပုံ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မော်ရင်ဟို ရဲ့ ဝေဖန်မှု အပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန့်ပြန် လိုက်တဲ့ #လမ်းပတ်
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ မနေ့ည က ကစား သွားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့် ပွဲစဉ် မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ကို ၄ဂိုးပြတ် နဲ့ အရေးနိမ့် ခဲ့ရပြီး နည်းပြသစ် ဖြစ်သူ ဖရန့် လမ်းပတ် အတွက် အဖွင့် ဆိုးစေခဲ့ပါတယ် ။ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ထို ပွဲစဉ် မှာ ရလဒ်ပိုင်း အရ ၄ဂိုးပြတ် နဲ့ အရေးနိမ့် ခဲ့ပေမယ့် နည်းစနစ် နဲ့ ကစားပုံပိုင်း အများကြီး ကောင်းမွန် ခဲ့ပြီး အဆုံးသတ်ပိုင်း မှာ လိုအပ်ချက် ရှိခဲ့လို့သာ သွင်းဂိုး တွေနဲ့ ဝေးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ထို ပွဲစဉ် အပြီး မှာ ချယ်လ်ဆီး နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြဟောင်း ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ကတော့ ၄င်းရဲ့ တပည့်ဟောင်း ဖြစ်သူ ချယ်လ်ဆီး နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် ရဲ့ ပွဲထုတ်ပုံ တွေကို ဦးတည် ဝေဖန် ခဲ့တာကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရပါတယ် ။ လူငယ် ကစားသမား တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ တမ်မီ အေဘရာဟမ် ၊ မေဆင်မောင့်တ် တို့ အစား ဝါရင့် ကစားသမား တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဝီလီယံ ၊ ကန်တေ ၊ ဂျရူး တို့ကို အသုံးပြုသင့်တယ် လို့ မော်ရင်ဟို က ပြောဆို ဝေဖန် ခဲ့ပါတယ် ။
မနေ့က ပွဲပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာတော့ သတင်းထောက် တွေက လမ်းပတ် ကို မော်ရင်ဟို သုံးသပ် ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည် မေးမြန်း ခဲ့ရာ လမ်းပတ် က ” သူက မေဆင်မောင့်တ် ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကို လုံးဝ မကြိုက်ဘူး လို့ တကယ် ပြောခဲ့တာလား ? မေဆင်မောင့်တ် ဆိုတဲ့ နာမည် ကိုရော ထည့်ပြော ခဲ့ရဲ့လား ? ” လို့ ပြန်လည် တုန့်ပြန် ခဲ့ပါတယ် ။ ထိုစဉ် သတင်းထောက် တဦးက ” ဟုတ်ပါတယ် ။ ဟိုဆေး ဟာ ချယ်လ်ဆီး လူငယ် ၃ယောက် ကို ဝေဖန် ခဲ့ပါတယ် ။ ” လို့ ပြန်ပြော ခဲ့ပါတယ် ။
အဲ့ဒီမှာ လမ်းပတ် က ” ကောင်းပြီ ။ ကျွန်တော့ အနေနဲ့ ပွဲထွက် ကစားဖို့ အဆင့်မပြေ သေးတဲ့ အဓိက ကစားသမား တချို့ အတွက် အသင်း ရဲ့ ဆေးအဖွဲ့ ကိုလည်း သွားပြီး အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူး ။ အတွေ့အကြုံ ရှိသည် ဖြစ်စေ ၊ မရှိဘူး ဖြစ်စေ ၊ ဒီနေ့ပွဲ မှာ ကစားခွင့် ရတဲ့ ကစားသမား တွေနဲ့ အရန်ခုံ မှာ ထိုင်ရမယ့် ကစားသမား တွေက သက်သက်စီပါပဲ ။ တကယ့် ပွဲချိန် အတွင်း မှာလည်း ကျွန်တော် တို့ဟာ မိနစ် ၅၀ ကနေ ၆၀ အတွင်း ပိုကောင်းတဲ့ အသင်း အနေနဲ့ ရပ်တည် ခဲ့တာပါ ။ ”
” တဖက် မှာလည်း ကျွန်တော် တို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အမှားအယွင်း ၄ခု ကနေ ပြိုင်ဖက် ကို သွင်းဂိုး ၄ဂိုး ခွင့်ပြု ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါဟာ ကျွန်တော် တို့ အတွက် လက်ခံ ရ ခက်ခဲတဲ့ အမှန်တရား တခု ပါပဲ ။ ဘယ်သူတွေက ကျွန်တော် တို့ အပေါ် ဝေဖန် နေကြတယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် လုံးဝ ဂရုမစိုက်ပါဘူး ။ တချိန်တည်း မှာပဲ ကျွန်တော် တို့ဟာ ဘယ်လို ကစားသမားမျိုး တွေ ပိုင်ဆိုင် ထားတာလဲ ဆိုတာကိုလည်း လူတိုင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိကြမှာပါ ။ ”
” လက်ရှိ အသင်းသား တွေ အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိသလို ၊ ကျွန်တော် တို့သာ ဒီနေ့ပွဲ အစောပိုင်း မှာ အဆုံးသတ် သေချာ ခဲ့မယ် ဆိုရင် ၂ဂိုးပြတ် ၊ ၃ဂိုးပြတ်လောက် နဲ့ ပြိုင်ဖက် ကို ဦးဆောင် ထားပြီးသား ဖြစ်နေခဲ့မှာပါ ။ ဒါဆိုရင် ဒီနေ့ပွဲ ရလဒ် ကလည်း တမျိုးတဖုံ ပြောင်းလဲ သွားနိုင်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။ ဆက်လက်ပြီး လမ်းပတ် က ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ် တွေ အနေနဲ့ အသင်း ရဲ့ အတွေ့အကြုံ နုနယ် သေးတဲ့ လူငယ် ကစားသမား တွေ အပေါ် စိတ်ရှည် သည်းခံ ပေးဖို့လည်း တောင်းဆို ခဲ့ပါတယ် ။
လမ်းပတ် က ” ဟုတ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ဟာ ဒီနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ မှာ အသင်း အင်အား တောင့်တင်းဖို့ အတွက် ကစားသမားသစ် တွေ ဖြည့်တင်းခွင့် မရှိခဲ့ပါဘူး ။ တဖက် မှာ ကျွန်တော် တို့ အသင်း ဟာ အလားအလာ ကောင်းတွေ ရှိနေတဲ့ လူငယ် ကစားသမားကောင်း တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ် ။ နောက်ပြီး ဒဏ်ရာ ရ ကစားသမား တချို့ ရှိနေသေးတာ ကို မမေ့ပါနဲ့ဦး ။ ကျွန်တော် တို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ အဆင့် တဆင့် ဆီကို ရောက်ရှိအောင် လုပ်ဆောင် နေရတုန်းပါ ။ ”
” ဒီနေ့ ပွဲမှာ ရရှိ ခဲ့တဲ့ အခက်အခဲ နဲ့ အမှားအယွင်း တွေဆီကနေ သင်ခန်းစာ ရယူပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြင်ဆင် နိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ထားပါတယ် ။ ဒီနေ့ပွဲ ရဲ့ ပွဲချိန် အတွင်း နဲ့ အဝတ်လဲခန်း က ကစားသမား တွေရဲ့ ခံစားချက် နဲ့ စိတ်ပျက်နေမှု အပေါ် ကျွန်တော် အပြည့်အဝ နားလည်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ပွဲ မှာ ကျွန်တော် သဘောကျမိတဲ့ အရာ တချို့ လည်း ရှိခဲ့ပါတယ် ။ တချို့ အကြောင်းအရာ လေးခု လောက် ကျွန်တော် မနှစ်သက် ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ဟာ ဒီလို အမှားအယွင်း တွေကနေ တိမ်းရှောင် နေလို့ မရပါဘူး ။ ”
” ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို ကိုင်တွယ် ခဲ့ဖူးတဲ့ မန်နေဂျာ အများစု ဟာ ကစားသမားသစ် တွေကို ခေါ်ယူပြီး သူတို့ လိုအပ်တဲ့ ကစားပုံ ထဲကို အံဝင်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ အခွင့်အရေး တွေ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ အတွက် ကတော့ အခု အချိန် မှာ ဒါမျိုးက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူလို့ မရတာကိုပဲ ကျွန်တော် တို့ စောဒက တက်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော့ အလုပ် ကျွန်တော် ဆက်လုပ် သွားမှာပါ ။ ဒီနေ့ပွဲမှာ ကျွန်တော် ဟာ အပေါင်း လက္ခဏာ ဆောင်ခဲ့တဲ့ အခိုက်အတန့် တချို့ ကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရပါတယ် ။ ”
” ဒီနေ့ပွဲ အပြီးမှာ ပရိသတ် တွေ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ကစားပုံ ကို ကြည့်ပြီး လက်ခံမှု တချို့ ပေးနိုင်ခဲ့တယ် လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ မှန်ကန်တဲ့ အရာ တွေကို လုပ်ဆောင် နေတဲ့ အသင်း တသင်း ရဲ့ ကစားပုံ ကို ကြည့်ရှု နေခဲ့ရလို့ပါ ။ မိနစ် ၆၀ အတွင်းမှာ ပွဲရလဒ် က ကျွန်တော် တို့ လိုချင်တဲ့ ပုံစံ နဲ့ ပြောင်းပြန် ဖြစ်သွား ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီနေ့ ပွဲရလဒ် ဟာ လူငယ် ကစားသမား တွေ အတွက် ကြီးမားတဲ့ သင်ခန်းစာ တခု ဖြစ်စေလိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော် ယူဆ မိပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
ယူနိုကျတကျ နဲ့ ပှဲမှ လူထုတျပုံ နဲ့ ပတျသကျပွီး မျောရငျဟို ရဲ့ ဝဖေနျမှု အပျေါ ပွငျးပွငျးထနျထနျ တုနျ့ပွနျ လိုကျတဲ့ #လမျးပတျ
ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ မနညေ့ က ကစား သှားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ အဖှငျ့ ပှဲစဉျ မှာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ကို ၄ဂိုးပွတျ နဲ့ အရေးနိမျ့ ခဲ့ရပွီး နညျးပွသဈ ဖွဈသူ ဖရနျ့ လမျးပတျ အတှကျ အဖှငျ့ ဆိုးစခေဲ့ပါတယျ ။ ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ ထို ပှဲစဉျ မှာ ရလဒျပိုငျး အရ ၄ဂိုးပွတျ နဲ့ အရေးနိမျ့ ခဲ့ပမေယျ့ နညျးစနဈ နဲ့ ကစားပုံပိုငျး အမြားကွီး ကောငျးမှနျ ခဲ့ပွီး အဆုံးသတျပိုငျး မှာ လိုအပျခကျြ ရှိခဲ့လို့သာ သှငျးဂိုး တှနေဲ့ ဝေးခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ ။
ထို ပှဲစဉျ အပွီး မှာ ခယျြလျဆီး နဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နညျးပွဟောငျး ဟိုဆေး မျောရငျဟို ကတော့ ၄ငျးရဲ့ တပညျ့ဟောငျး ဖွဈသူ ခယျြလျဆီး နညျးပွ ဖရနျ့ လမျးပတျ ရဲ့ ပှဲထုတျပုံ တှကေို ဦးတညျ ဝဖေနျ ခဲ့တာကို မွငျတှေ့ ခဲ့ရပါတယျ ။ လူငယျ ကစားသမား တှေ ဖွဈကွတဲ့ တမျမီ အဘေရာဟမျ ၊ မဆေငျမောငျ့တျ တို့ အစား ဝါရငျ့ ကစားသမား တှေ ဖွဈကွတဲ့ ဝီလီယံ ၊ ကနျတေ ၊ ဂရြူး တို့ကို အသုံးပွုသငျ့တယျ လို့ မျောရငျဟို က ပွောဆို ဝဖေနျ ခဲ့ပါတယျ ။
မနကေ့ ပှဲပွီး သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲ မှာတော့ သတငျးထောကျ တှကေ လမျးပတျ ကို မျောရငျဟို သုံးသပျ ခဲ့တာနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွနျလညျ မေးမွနျး ခဲ့ရာ လမျးပတျ က ” သူက မဆေငျမောငျ့တျ ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ကို လုံးဝ မကွိုကျဘူး လို့ တကယျ ပွောခဲ့တာလား ? မဆေငျမောငျ့တျ ဆိုတဲ့ နာမညျ ကိုရော ထညျ့ပွော ခဲ့ရဲ့လား ? ” လို့ ပွနျလညျ တုနျ့ပွနျ ခဲ့ပါတယျ ။ ထိုစဉျ သတငျးထောကျ တဦးက ” ဟုတျပါတယျ ။ ဟိုဆေး ဟာ ခယျြလျဆီး လူငယျ ၃ယောကျ ကို ဝဖေနျ ခဲ့ပါတယျ ။ ” လို့ ပွနျပွော ခဲ့ပါတယျ ။
အဲ့ဒီမှာ လမျးပတျ က ” ကောငျးပွီ ။ ကြှနျတော့ အနနေဲ့ ပှဲထှကျ ကစားဖို့ အဆငျ့မပွေ သေးတဲ့ အဓိက ကစားသမား တခြို့ အတှကျ အသငျး ရဲ့ ဆေးအဖှဲ့ ကိုလညျး သှားပွီး အပွဈတငျလို့ မရပါဘူး ။ အတှအေ့ကွုံ ရှိသညျ ဖွဈစေ ၊ မရှိဘူး ဖွဈစေ ၊ ဒီနပှေဲ့ မှာ ကစားခှငျ့ ရတဲ့ ကစားသမား တှနေဲ့ အရနျခုံ မှာ ထိုငျရမယျ့ ကစားသမား တှကေ သကျသကျစီပါပဲ ။ တကယျ့ ပှဲခြိနျ အတှငျး မှာလညျး ကြှနျတျော တို့ဟာ မိနဈ ၅၀ ကနေ ၆၀ အတှငျး ပိုကောငျးတဲ့ အသငျး အနနေဲ့ ရပျတညျ ခဲ့တာပါ ။ ”
” တဖကျ မှာလညျး ကြှနျတျော တို့ဟာ ကိုယျ့ရဲ့ အမှားအယှငျး ၄ခု ကနေ ပွိုငျဖကျ ကို သှငျးဂိုး ၄ဂိုး ခှငျ့ပွု ခဲ့ရပါတယျ ။ ဒါဟာ ကြှနျတျော တို့ အတှကျ လကျခံ ရ ခကျခဲတဲ့ အမှနျတရား တခု ပါပဲ ။ ဘယျသူတှကေ ကြှနျတျော တို့ အပျေါ ဝဖေနျ နကွေတယျ ဆိုတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ကြှနျတျော လုံးဝ ဂရုမစိုကျပါဘူး ။ တခြိနျတညျး မှာပဲ ကြှနျတျော တို့ဟာ ဘယျလို ကစားသမားမြိုး တှေ ပိုငျဆိုငျ ထားတာလဲ ဆိုတာကိုလညျး လူတိုငျး ရှငျးရှငျးလငျးလငျး သိကွမှာပါ ။ ”
” လကျရှိ အသငျးသား တှေ အပျေါမှာ ကြှနျတျော ယုံကွညျမှု အပွညျ့ ရှိသလို ၊ ကြှနျတျော တို့သာ ဒီနပှေဲ့ အစောပိုငျး မှာ အဆုံးသတျ သခြော ခဲ့မယျ ဆိုရငျ ၂ဂိုးပွတျ ၊ ၃ဂိုးပွတျလောကျ နဲ့ ပွိုငျဖကျ ကို ဦးဆောငျ ထားပွီးသား ဖွဈနခေဲ့မှာပါ ။ ဒါဆိုရငျ ဒီနပှေဲ့ ရလဒျ ကလညျး တမြိုးတဖုံ ပွောငျးလဲ သှားနိုငျပါတယျ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။ ဆကျလကျပွီး လမျးပတျ က ခယျြလျဆီး ပရိသတျ တှေ အနနေဲ့ အသငျး ရဲ့ အတှအေ့ကွုံ နုနယျ သေးတဲ့ လူငယျ ကစားသမား တှေ အပျေါ စိတျရှညျ သညျးခံ ပေးဖို့လညျး တောငျးဆို ခဲ့ပါတယျ ။
လမျးပတျ က ” ဟုတျပါတယျ ။ ကြှနျတျော တို့ဟာ ဒီနှဈ နှရောသီ အပွောငျးအရှေ့ မှာ အသငျး အငျအား တောငျ့တငျးဖို့ အတှကျ ကစားသမားသဈ တှေ ဖွညျ့တငျးခှငျ့ မရှိခဲ့ပါဘူး ။ တဖကျ မှာ ကြှနျတျော တို့ အသငျး ဟာ အလားအလာ ကောငျးတှေ ရှိနတေဲ့ လူငယျ ကစားသမားကောငျး တှကေို ပိုငျဆိုငျ ထားပါတယျ ။ နောကျပွီး ဒဏျရာ ရ ကစားသမား တခြို့ ရှိနသေေးတာ ကို မမပေ့ါနဲ့ဦး ။ ကြှနျတျော တို့ သတျမှတျ ထားတဲ့ အဆငျ့ တဆငျ့ ဆီကို ရောကျရှိအောငျ လုပျဆောငျ နရေတုနျးပါ ။ ”
” ဒီနေ့ ပှဲမှာ ရရှိ ခဲ့တဲ့ အခကျအခဲ နဲ့ အမှားအယှငျး တှဆေီကနေ သငျခနျးစာ ရယူပွီး မွနျမွနျဆနျဆနျ ပွငျဆငျ နိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ ထားပါတယျ ။ ဒီနပှေဲ့ ရဲ့ ပှဲခြိနျ အတှငျး နဲ့ အဝတျလဲခနျး က ကစားသမား တှရေဲ့ ခံစားခကျြ နဲ့ စိတျပကျြနမှေု အပျေါ ကြှနျတျော အပွညျ့အဝ နားလညျပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနပှေဲ့ မှာ ကြှနျတျော သဘောကမြိတဲ့ အရာ တခြို့ လညျး ရှိခဲ့ပါတယျ ။ တခြို့ အကွောငျးအရာ လေးခု လောကျ ကြှနျတျော မနှဈသကျ ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော တို့ဟာ ဒီလို အမှားအယှငျး တှကေနေ တိမျးရှောငျ နလေို့ မရပါဘူး ။ ”
” ခယျြလျဆီး အသငျး ကို ကိုငျတှယျ ခဲ့ဖူးတဲ့ မနျနဂြော အမြားစု ဟာ ကစားသမားသဈ တှကေို ချေါယူပွီး သူတို့ လိုအပျတဲ့ ကစားပုံ ထဲကို အံဝငျအောငျ လုပျဆောငျဖို့ အခှငျ့အရေး တှေ ပိုငျဆိုငျ ခဲ့ပါတယျ ။ ကြှနျတျော တို့ အတှကျ ကတော့ အခု အခြိနျ မှာ ဒါမြိုးက မဖွဈနိုငျပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ကစားသမားသဈ ချေါယူလို့ မရတာကိုပဲ ကြှနျတျော တို့ စောဒက တကျနမှော မဟုတျပါဘူး ။ ကြှနျတော့ အလုပျ ကြှနျတျော ဆကျလုပျ သှားမှာပါ ။ ဒီနပှေဲ့မှာ ကြှနျတျော ဟာ အပေါငျး လက်ခဏာ ဆောငျခဲ့တဲ့ အခိုကျအတနျ့ တခြို့ ကို မွငျတှေ့ ခဲ့ရပါတယျ ။ ”
” ဒီနပှေဲ့ အပွီးမှာ ပရိသတျ တှေ ကြှနျတျော တို့ရဲ့ ကစားပုံ ကို ကွညျ့ပွီး လကျခံမှု တခြို့ ပေးနိုငျခဲ့တယျ လို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ မှနျကနျတဲ့ အရာ တှကေို လုပျဆောငျ နတေဲ့ အသငျး တသငျး ရဲ့ ကစားပုံ ကို ကွညျ့ရှု နခေဲ့ရလို့ပါ ။ မိနဈ ၆၀ အတှငျးမှာ ပှဲရလဒျ က ကြှနျတျော တို့ လိုခငျြတဲ့ ပုံစံ နဲ့ ပွောငျးပွနျ ဖွဈသှား ခဲ့ရပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့မို့ ဒီနေ့ ပှဲရလဒျ ဟာ လူငယျ ကစားသမား တှေ အတှကျ ကွီးမားတဲ့ သငျခနျးစာ တခု ဖွဈစလေိမျ့မယျ လို့ ကြှနျတျော ယူဆ မိပါတယျ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။